Canonical dia tsy mikasa ny hitondra fampitambarana ny Meizu MX4 | Ubunlog
Paul Aparicio | | Ubuntu, Ubuntu Phone
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina hatolotr'i Canonical amin'ny 2016 dia ny fiarahan'ny Ubuntu. Ity fampitambarana efa nandrasana hatry ny ela ity dia hahafahantsika mampifandray ny Telefaona Ubuntu amin'ny totozy, fitendry ary efijery ary hampiasa azy io ho toy ny solosaina birao, izay toa tsara tokoa. Fa hanararaotra an'io endri-javatra io daholo ve ny telefaona Ubuntu Touch sy ny takelaka rehetra? Toa tsy izany, nanomboka teo tsy manana drafitra hitondrana an'io fiovana io any amin'ny Meizu MX4.
Ny Meizu MX4 dia tsy misy fifandraisana HDMI na MHL azo alaina eo amin'ny haavon'ny fitaovana. Ny safidy tokana ahafahana mampiasa ny MX4 ho toy ny solosaina birao manararaotra ny fampifandraisana dia ny fampiasana teknolojia toa Miracast izay mamela anao hampifandray telefaona amin'ny efijery lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny Wi-Fi. Ny mpandrindra Ubuntu dia efa miasa ka ny Meizu Pro 5 dia afaka mampiasa an'io haitao io, fa ny MX4 kosa navela hijanona mandritra ny fotoana fohy. Canonical dia mitatitra fa «tsy manana drafitra»Hanampiana fiasa tsy misy tariby amin'ny Meizu MX4.
Moa ve ny Meizu MX4 hanararaotra ny fampirafesana?
Tonga ny fampahalalana Canonical amin'ny endrika valiny ho an'ny tompona Meizu MX4 iray izay nanontany raha novolavolaina ity karazana fampifangaroana ity hanampiana ny MX4 amin'ny ho avy. Namaly i John MacAleely:
Mampalahelo fa tsy manana drafitra isika amin'izao fotoana izao, toa ny Canonical, hanolotra fanohanana fampisehoana tsy misy tariby ho an'ny MX4. Amin'izao fotoana izao, ny prototype dia mitaky Android 5 BSP ary tsy manana iray amin'ireo izahay ho an'ny MX4.
Ny Meizu MX4 dia manana RAM 2GB ary mpandrafitra octa-core ARM, ka mahamenatra tokoa raha tsy afaka manararaotra ny fiarahan'ny Ubuntu. Ny solosainao dia tsy solvent fotsiny ny manao azy. Ary koa, afaka mifamadika amin'ny maody birao misy varavarankely izy raha mampifandray fitendry Bluetooth sy totozy aminy isika.
Na izany na tsy izany, ny tsy fananan'izy ireo drafitra amin'izao fotoana izao dia tsy midika hoe nanidy varavarana ho tsara izy ireo. Canonical's Simon Fels nilaza fa 'manampy amin'ny fandefasana ny MediaCodecSource amin'ny hazo Android 4.x no dingana voalohany»Mba hahafahana manome fahafaha-manao fampisehoana tsy misy tariby amin'ny MX4, zavatra azon'ny vondron'olona atao. Ho hitantsika izay hitranga amin'ny farany. Mino aho fa amin'ny farany dia ho tanteraka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Canonical dia tsy mikasa ny hitondra fampitambarana ny Meizu MX4
luis fortanet dia hoy izy:
Tena marina! ... Ny tsy fananan'izy ireo drafitra eo noho eo dia tsy midika hoe tsy ho tonga izany ... amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa dia ho tonga ... eny, tsy maintsy miandry zavatra hafa isika ... Miarahaba.
Mamaly an'i luis fortanet
Ny andron'ny boriky dia hamafana azy ireo amin'ny kanônika izy ireo raha toa ka manilika zavatra foana na mametraka zavatra. Ankehitriny dia heveriko fa tsy ho tonga miaraka amin'ny firaisan-tsaina 16.04 ny ubuntu 8 .: /
Salama, Juanjo. Tsy ho tonga izy ireo. Heveriko fa ho tonga ao amin'ny Ubuntu 16.10. Efa nanandrana aho ary tena maintso izy, hany ka tsy mamela ahy hiditra amin'ireo rindranasa akory. Tsy tiako mihitsy ny Unity 7, ho ahy dia miadana loatra izany. Mieritreritra aho fa hifindra amin'ny Ubuntu MATE.
Ny antsipiriany kely amin'ny famolavolana tontonana Xubuntu
Xubuntu 16.04 dia tsy hanana mpitantana haino aman-jery intsony; manolo-kevitra hampiasa ny rahona